“Hena Koraa Ne Akoa Nokwafo ne Ɔbadwemma” No? | Adesua
Ɔnam Nnipa Kakra so Ma Mpempem Aduan
ASETENAM NSƐM Yɛayɛ Krado sɛ Yɛbɛsom Yehowa Wɔ Baabiara
“Mfonini Yi Yɛ Fɛ!”
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | July 2013
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mexican Sign Language Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Hena koraa ne akoa nokwafo ne ɔbadwemma a ne wura de no asi n’asomfo so . . . no?”—MAT. 24:45.
HWƐ SƐ WUBEHU MMUAE NO A
Hena ne ‘asomfo’ no, na bere bɛn na Yesu de akoa nokwafo no sii wɔn so?
Bere bɛn na Kristo de akoa nokwafo no besi nea ɔwɔ nyinaa so, na dɛn saa na ɔwɔ?
1, 2. Henanom na Yesu nam wɔn so rema yɛn aduan nnɛ? Adɛn nti na ehia sɛ yehu wɔn a ɔnam wɔn so ma yɛn aduan no?
ONUAWA bi kyerɛw krataa kɔmaa anuanom a wɔwɔ Yehowa Adansefo adwumayɛbea ti de kyerɛɛ wɔn adwuma no ho anisɔ. Ne krataa no mu nsɛm bi ni: “Anuanom, sɛ mese mereka mpɛn dodow a makenkan asafo nhoma bi aka sɛ ‘eyi deɛ wɔkyerɛw maa me’ a, anka adagyew bɛbɔ me.” Wonkaa biribi saa pɛn? Yɛn mu pii aka saa pɛn. Ɛsɛ sɛ eyi yɛ yɛn nwonwa anaa? Dabi.
2 Yesu aka sɛ ɔbɛma yɛn aduan. Ampa ara yenya honhom fam aduan bere ano, na eyi yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Yesu a ɔyɛ asafo no Ti no redi ne bɔhyɛ so. Ɛnde, henanom na ɔnam wɔn so ma yɛn aduan? Bere a Yesu reka ne mmae ho asɛm no, ɔkae sɛ ɔbɛma “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no ama n’asomfo “aduan bere a ɛsɛ mu.” * (Monkenkan Mateo 24:45-47.) Enti Yesu nam akoa kuw no so ma n’akyidifo anokwafo aduan wɔ awiei bere yi mu. Ehia sɛ yehu wɔn a wogyina hɔ sɛ akoa nokwafo no. Efisɛ aduan a yenya fi akoa nokwafo no hɔ na ɛboa yɛn ma yɛsom Onyankopɔn yiye na yɛne ne ntam yɛ papa.—Mat. 4:4; Yoh. 17:3.
3. Bere bi a atwam no, dɛn na yɛka faa mfatoho a ɛfa akoa nokwafo no ho wɔ yɛn nhoma ahorow mu?
3 Ɛnde, yɛbɛte Yesu mfatoho a ɛfa akoa nokwafo no ho ase sɛn? Bere bi a atwam no yɛkaa wɔ yɛn nhoma ahorow mu sɛ Pentekoste 33 Y.B. mu na Yesu de akoa nokwafo no sii n’asomfo so. Yɛkyerɛkyerɛɛ mu sɛ akoa no gyina hɔ ma Kristofo a wɔasra wɔn a wɔwɔ asase so nyinaa fi Pentekoste 33 Y.B. mu. Yɛkae nso sɛ ‘asomfo’ no gyina hɔ ma Kristofo nkorɛnkorɛ a wɔasra wɔn. Afei nso na yegye di sɛ 1919 na Yesu de akoa nokwafo no sii “nea ɔwɔ nyinaa so,” kyerɛ sɛ Ahenni ho nneɛma a ɔwɔ wɔ asase so nyinaa. Nanso bere a yegyee bere san tweetwee asɛm no mu na yɛbɔɔ ho mpae no, yehui sɛ ehia sɛ yɛyɛ nsakrae bi wɔ yɛn ntease mu—kyerɛ sɛ, ntease a yɛwɔ wɔ Yesu mfatoho a ɛfa akoa nokwafo ne ɔbadwemma ho no, ɛsɛ sɛ yɛsesa mu. (Mmeb. 4:18) Momma yɛmpɛɛpɛɛ mfatoho no mu na yɛnhwɛ sɛnea ɛfa yɛn nyinaa ho—wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro ne wɔn a wɔbɛtena asase so nyinaa.
BERE BƐN NA MFATOHO NO BAAM?
4-6. Adɛn nti na yebetumi aka sɛ efi 1914 na Yesu mfatoho a ɛfa akoa nokwafo no ho fii ase baam?
4 Nsɛm foforo a ɛwɔ Mateo ti 24 ma yehu sɛ mfatoho a ɛfa akoa nokwafo ne ɔbadwemma ho no amfi ase amma mu wɔ Pentekoste 33 Y.B. mu, na mmom awiei bere yi mu. Momma yɛnhwɛ nea ɛwɔ Kyerɛwnsɛm no mu a ɛma yɛka saa.
5 Yesu hyɛɛ ne “mmae ne bere a ɛwɔ hɔ yi awiei ho sɛnkyerɛnne” ho nkɔm, na mfatoho a ɛfa akoa nokwafo no ho no ka nkɔmhyɛ no ho. (Mat. 24:3) Nkɔmhyɛ no fã a edi kan wɔ Mateo 24:4-22, na ɛwɔ mmamu abien. Ne fã a edi kan baa mu fi afe 33 Y.B. kosi 70 Y.B. mu. Nanso ne fã kɛse no ara nya mmamu wɔ yɛn bere yi so. So eyi kyerɛ sɛ nea Yesu ka faa akoa nokwafo no ho nso wɔ mmamu abien? Dabi, ɛnte saa.
6 Nsɛm a Yesu kae wɔ Mateo 24:29 ne nea ɛtoa so nyinaa fa yɛn bere yi ho titiriw. (Monkenkan Mateo 24:30, 42, 44.) Bere a ɔreka ahohiahia kɛse no ho asɛm no, ɔkae sɛ nkurɔfo ‘behu sɛ onipa Ba no nam ɔsoro mununkum mu reba.’ Afei nso ɔkaa nea enti a ɛsɛ sɛ wɔn a wɔte nna a edi akyiri yi mu no wɛn. Ɔkae sɛ: “Munnim da ko a mo Wura bɛba,” na “dɔn a mo ani nna so mu na onipa Ba no bɛba.” * Bere a Yesu ano gu so reka nneɛma a ebesisi nna a edi akyiri yi mu no ara na ɔkaa mfatoho a ɛfa akoa nokwafo no ho no. Enti yebetumi aka sɛ efi 1914 a nna a edi akyiri no fii ase no na nea Yesu ka faa akoa nokwafo no ho fii ase baam. Nkyerɛkyerɛmu a ɛte saa tɔ asom. Adɛn ntia?
7. Bere a otwabere no fii ase no, asɛmmisa bɛn na ɛsɔree, na dɛn ntia?
7 San susuw asɛmmisa yi ho: “Hena koraa ne akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no? Asomafo no bere so no, na obiara nhaw ne ho mmisa saa asɛm no. Yehui wɔ adesua a edi eyi anim mu sɛ na asomafo no tumi yɛ anwonwade, na na wotumi mpo de honhom kronkron akyɛde ma afoforo. Ɛno yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ na Yehowa taa wɔn akyi. (Aso. 5:12) Enti ɛbɛyɛ dɛn na obi ahaw ne ho abisa sɛ, ‘Hena koraa na Kristo apaw no sɛ onni yɛn anim?’ Nanso eduu 1914 no na nneɛma asesa. Otwabere no fii ase saa afe no. Afei de na bere aso sɛ woyiyi nwura bɔne no fi awi (anaa ayuo) no mu. (Mat. 13:36-43) Bere a twabere no fii ase no, asɛmmisa yi sɔree: Esiane sɛ na atoro Kristofo pii kyerɛ sɛ wɔyɛ Yesu akyidifo ankasa nti, na ɛbɛyɛ dɛn na wɔahu wɔn a wɔyɛ awi anaa Kristofo a wɔasra wɔn no? Mfatoho a ɛfa akoa nokwafo no ho ma yenya asɛm no ho mmuae. Ɛma yehu sɛ Kristo akyidifo a wɔasra wɔn no na wobenya honhom fam aduan adi amee.
8. Adɛn nti na ɛfata sɛ akoa nokwafo no yɛ Kristofo a wɔasra wɔn?
8 Akoa nokwafo no yɛ Kristofo a wɔasra wɔn. Wɔfrɛ saafo no “adehye asɔfokuw,” na wɔde ahyɛ wɔn nsa sɛ wɔnka “nea ɔfrɛɛ [wɔn] fii sum mu baa ne hann nwonwaso mu no nneyɛe pa nkyerɛ.” (1 Pet. 2:9) Enti “adehye asɔfokuw” yi ara na yɛhwɛ kwan sɛ wɔde nokware no bɛkyerɛkyerɛ wɔn mfɛfo gyidifo.—Mal. 2:7; Adi. 12:17.
9. Kristofo a wɔasra wɔn nyinaa na wɔbom yɛ akoa nokwafo no anaa? Kyerɛkyerɛ mu.
9 Kristofo a wɔasra wɔn a wɔwɔ asase so nyinaa na wɔbom yɛ akoa nokwafo no anaa? Dabi. Nokwasɛm ne sɛ ɛnyɛ wɔn a wɔasra wɔn nyinaa na wɔde honhom fam aduan ma wɔn mfɛfo gyidifo wɔ wiase nyinaa. Kristofo a wɔasra wɔn no bi yɛ asafo mu asomfo anaa mpanyimfo wɔ wɔn asafo mu. Wɔkɔ nkurɔfo fie kɔkyerɛkyerɛ wɔn, na wɔkyerɛkyerɛ wɔ wɔn asafo mu nso. Afei nso akwankyerɛ biara a efi yɛn asafo no ti ba no, wogye tom de yɛ adwuma. Nanso wɔnka wɔn a wɔde honhom fam aduan ma anuanom wɔ wiase nyinaa no ho. Bio, wɔn a wɔasra wɔn no bi yɛ anuanom mmea a wɔbrɛ wɔn ho ase, enti ɛnyɛ ade a wɔbɛsɔre sɛ wɔrekyerɛkyerɛ wɔ asafo no mu.—1 Kor. 11:3; 14:34.
10. Hena ne akoa nokwafo ne ɔbadwemma no?
10 Ɛnde, hena ne akoa nokwafo ne ɔbadwemma no? Akoa no ne Kristofo kakraa bi a wɔasra wɔn a wosiesie honhom fam aduan ma wɔn mfɛfo gyidifo wɔ Kristo mmae mu no. Eyi ne ɛsa a Yesu twa too hɔ no hyia: Ɔfaa nnipa kakraa bi so maa mpempem aduan. Nna a edi akyiri yi nyinaa, anuanom a wɔasra wɔn a wɔyɛ akoa nokwafo no abom ayɛ adwuma wɔ Yehowa Adansefo adwumayɛbea ti. Akoa nokwafo no ne Yehowa Adansefo Akwankyerɛ Kuw no. Nanso hyɛ no nsow sɛ Yesu mfatoho no mu no, wanka “nkoa” na mmom “akoa.” Eyi kyerɛ sɛ ɛnyɛ nnipa nkorɛnkorɛ ho asɛm na na ɔreka, na mmom nnipa bi a wɔaka abom reyɛ adwuma sɛ kuw biako. Enti gyinae biara a Akwankyerɛ Kuw no besi no, kuw no na ɛka bom si.
HENANOM NE ‘ASOMFO’ NO?
11, 12. (a) Dwumadi abien bɛn na ɛhyɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no nsa? (b) Bere bɛn na Yesu de akoa nokwafo no sii n’asomfo so, na hena na ɔpaw no?
11 Yɛnhyɛ no nsow sɛ Yesu mfatoho no mu no, ɔkae sɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no bɛhwɛ dwumadi abien so. Nea edi kan, Bible ka sɛ ɔde no “asi n’asomfo so.” Nea ɛto so abien, Yesu kae sɛ “ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so.” Esiane sɛ mfatoho yi nya ne mmamu wɔ awiei bere yi mu nti, yebetumi aka sɛ bere a Yesu bɛyɛɛ ɔhene wɔ 1914 mu akyi na ɔde dwumadi abien no nyinaa hyɛɛ akoa no nsa.
12 Ɛnde, bere bɛn na Yesu de akoa nokwafo no sii n’asomfo so? Sɛ yebetumi abua asɛm yi a, ɛsɛ sɛ yebu kɔmpɔ hwɛ nea esii 1914, bere a twabere no fii ase no. Sɛnea yɛahu no, saa bere no akuw pii bɔɔ wɔn ho nsammrane sɛ wɔyɛ Kristofo. Enti na kuw bɛn na Yesu begye atom na wapaw akoa nokwafo no afi mu? Bere a Yesu ne n’Agya bɛhwɛɛ sɛnea nneɛma te wɔ asɔrefie hɔ fi 1914 kosi 1919 mfiase no wohuu Kristofo anokwafo no. * (Mal. 3:1) Yehowa ne Yesu huu Bible Asuafo anokwafo kakraa bi a wɔn ani gye Yehowa ne n’Asɛm ho, na wɔn bo tɔɔ wɔn yam. Ná ehia sɛ Bible Asuafo no ankasa ho tew, na wɔbrɛɛ wɔn ho ase ma wɔtew wɔn ho. (Mal. 3:2-4) Na Bible Asuafo anokwafo no yɛ nokware Kristofo ampa. Afe 1919 no, Kristofo a wɔasra wɔn yi maa wɔn homene so. Saa bere no na Yesu paw mmarima a wɔfata fii wɔn mu yɛɛ wɔn akoa nokwafo ne ɔbadwemma no, na ɔde wɔn sii n’asomfo so.
13. Ɛhefo ne asomfo no, na dɛn ntia?
13 Ɛnde, henanom ne asomfo no? Yebetwa no tiaa a, eyinom ne wɔn a wɔn nsa ka honhom fam aduan no. Bere a nna a edi akyiri no fii ase no, na asomfo no nyinaa yɛ Kristofo a wɔasra wɔn. Nanso akyiri yi, nguan foforo mu nnipakuw kɛse no bɛkaa asomfo no ho. “Kuw biako” na ɛhyɛ Kristo ase, na seesei wɔn a wɔdɔɔso wom paa ne nguan foforo no. (Yoh. 10:16) Honhom fam aduan a akoa nokwafo no siesie no ara na akuw abien yi nyinaa di. Akwankyerɛ Kuw no mufo a ɛnnɛ wɔka bom yɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no nso ɛ? Anuanom yi nso hia honhom fam aduan. Enti wogye tom sɛ ankorankoro a wɔwɔ kuw no mu ka asomfo no ho, sɛnea Yesu akyidifo anokwafo a aka nyinaa ka ho no.
Sɛ yɛbɛkɔ soro oo, yɛbɛtena asase so oo, yɛn nyinaa yɛ ‘asomfo,’ na yehia honhom fam aduan koro no ara
14. (a) Dɛn na wɔde ahyɛ akoa nokwafo no nsa sɛ ɔnhwɛ so? Nneɛma bɛn saa na ɔhwɛ so? (b) Kɔkɔbɔ bɛn na Yesu de maa akoa nokwafo ne ɔbadwemma no? (Hwɛ adaka a wɔato din, “Sɛ Akoa Bɔne No . . .”)
14 Yesu de adwumasono bi ato akoa nokwafo ne ɔbadwemma no mmati so. Bible mmere mu no, sɛ akoa bi di nokware a, na ne wura ma ɔhwɛ ne fie. (Luka 12:42) Enti wɔde gyidi fie ahyɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no nsa sɛ ɔnhwɛ so. Nneɛma a ɔhwɛ so no bi ne Yehowa ahyehyɛde no agyapade, asɛnka adwuma, amansin ne amantam nhyiam. Bio nso ɔhwɛ ma wotintim Bible ho nhoma a yɛde kɔ asɛnka ne nea yɛn ankasa sua wɔ fie ne asafo nhyiam ase. Asomfo no bɔ mmɔden sɛ wobedi honhom fam aduan biara a akoa no de ma.
OWURA NO DE NO “BESI NEA ƆWƆ NYINAA SO”—BERE BƐN?
15, 16. Bere bɛn na Yesu de akoa nokwafo no besi nea ɔwɔ nyinaa so?
15 Bere a Yesu reka adwuma a ɛto so abien a ɔde bɛhyɛ akoa no nsa no, ɔkae sɛ “ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so.” Bere bɛn na Yesu bɛyɛ saa? Yesu kae sɛ: “Anigye ne akoa a ne wura bɛba abehu sɛ ɔreyɛ saa! Nokwarem mise mo sɛ, Ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so.” (Mat. 24:46, 47) Hyɛ no nsow sɛ bere a Yesu aba abehu sɛ akoa no ‘reyɛ saa,’ kyerɛ sɛ ɔrema n’asomfo honhom fam aduan no na ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so. Enti sɛ ɔde adwuma a edi kan no hyɛ akoa no nsa a, bere bi betwam ansa na ɔde nea ɛto so abien no ahyɛ ne nsa. Sɛ yebehu ɔkwan a Yesu bɛfa so de akoa no asi nea ɔwɔ nyinaa so ne bere a ɔbɛyɛ saa a, ehia sɛ yehu nneɛma abien bi. Ɛsɛ sɛ yehu bere a ɔbɛba ne “nea ɔwɔ nyinaa” no.
16 Bere bɛn na Yesu bɛba? Kyerɛwnsɛm no ankasa bua. Kae sɛ ansa na Yesu reka sɛ ɔde akoa no besi nea ɔwɔ nyinaa so no, na wadi kan aka ne ‘ba’ ho asɛm. Kae nso sɛ ne ‘ba’ a wɔaka ho asɛm wɔ ha no fa bere a ɔbɛba abebu abɔnefo atɛn na wasɛe wɔn wɔ wiase nhyehyɛe no awiei ho. * (Mat. 24:30, 42, 44) Enti ‘ba’ a Yesu “reba” de akoa nokwafo no abesi nea ɔwɔ nyinaa so no bɛbam wɔ ahohiahia kɛse no mu.
17. Dɛn saa na Yesu wɔ?
17 Ɛnde, dɛn ne ‘nea Yesu wɔ nyinaa’ no? Yesu kae sɛ ɔde akoa no “besi nea ɔwɔ nyinaa so.” Wanka sɛ nea ɔwɔ wɔ asase so nyinaa. Eyi kyerɛ sɛ nea ɔwɔ wɔ soro nso ka ho. Nokwasɛm ne sɛ Yesu wɔ tumi kɛse wɔ soro. Ɔkae sɛ: “Wɔde tumi nyinaa ama me wɔ ɔsoro ne asase so.” (Mat. 28:18; Efe. 1:20-23) Seesei sɛ yɛreka nea Yesu wɔ a, Mesia Ahenni no ka ho. Efi 1914 na wɔde Ahenni no maa no, na n’akyidifo a wɔasra wɔn benya Ahenni no mu kyɛfa.—Adi. 11:15.
18. Dɛn na ɛbɛma Yesu ani agye ho sɛ ɔde akoa no besi nea ɔwɔ nyinaa so?
18 Sɛ yɛhwɛ nea yɛabobɔ so abedu yi a, dɛn na yebetumi aka? Sɛ Yesu ba bebu atɛn wɔ ahohiahia kɛse no mu a, obehu sɛ akoa nokwafo no reyɛ adwuma a ɔde hyɛɛ ne nsa no pɛpɛɛpɛ, kyerɛ sɛ ɔrema n’asomfo honhom fam aduan bere a ɛsɛ mu. Afei Yesu de adwuma a ɛto so abien no bɛhyɛ akoa no nsa, kyerɛ sɛ, ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so. Yesu de nea ɔwɔ nyinaa bɛhyɛ akoa nokwafo no nsa bere a wɔanya wɔn soro akatua na wɔne Kristo redi ade no.
19. Akoa nokwafo no benya akatua kɛse wɔ soro asen wɔn mfɛfo a wɔasra wɔn no anaa? Kyerɛkyerɛ mu.
19 Akoa nokwafo no benya akatua kɛse wɔ soro asen wɔn mfɛfo a wɔasra wɔn no anaa? Dabi. Ɛtɔ da a, obi betumi de ade bi ahyɛ nnipa kakraa bi bɔ wɔ bere bi mu, nanso akyiri yi afoforo betumi anya mu kyɛfa. Ɛho nhwɛso ne asɛm a Yesu ka kyerɛɛ n’asomafo anokwafo 11 anadwo a ade rebɛkye ma wawu no. (Monkenkan Luka 22:28-30.) Yesu hyɛɛ saa mmarima kakra yi bɔ sɛ wɔn nokwaredi nti, akatua pa bi da hɔ retwɛn wɔn. Ɔne wɔn bedi ade wɔ n’Ahenni mu. Nanso mfe bi akyi no, Yesu kyerɛe sɛ 144,000 no nyinaa bɛtena nhengua so ne no adi ade. (Adi. 1:1; 3:21) Saa ara na ɔhyɛɛ bɔ wɔ Mateo 24:47 sɛ ɔde nea ɔwɔ nyinaa bɛhyɛ mmarima kakraa bi nsa, kyerɛ sɛ wɔn a wɔasra wɔn a wobom yɛ akoa nokwafo no. Nanso sɛ yɛreka a, 144,000 no nyinaa ne Yesu bedi tumi wɔ soro.—Adi. 20:4, 6.
Nnipa 144,000 no nyinaa ne Yesu bedi tumi wɔ soro (Hwɛ nkyekyɛm 19)
20. Adɛn nti na Yesu paw akoa nokwafo no? Dɛn na woasi nketekrakye sɛ wobɛyɛ?
20 Sɛnea asomafo no bere so Yesu faa nnipa kakraa bi so maa mpempem aduan no, saa ara na ɛnnɛ nso ɔnam akoa nokwafo ne ɔbadwemma no so rema nnipa pii aduan. Yesu paw akoa nokwafo no sɛ ɔmma n’akyidifo anokwafo honhom fam aduan daa wɔ nna a edi akyiri yi nyinaa mu. Wɔn a wɔasra wɔn ne nguan foforo no nyinaa hia saa aduan no. Ɛnde, momma yensi nketekrakye sɛ yɛbɛkɔ so abata wɔn a wɔasra wɔn a wɔyɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no ho. Yɛyɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ yɛn ani sɔ nea Yesu nam wɔn so reyɛ no.—Heb. 13:7, 17.
^ nky. 2 Nkyekyɛm 2: Na Yesu adi kan ayɛ mfatoho a ɛte saa ara, na ɔfrɛɛ “akoa” no “ofiehwɛfo,” na ɔfrɛɛ “n’asomfo” no “n’asomfo kuw.”—Luka 12:42-44.
^ nky. 6 Nkyekyɛm 6: Kristo ‘ba’ (Hela, er′kho·mai) nko, ɛnna ne “mmae” (pa·rou·si′a) nko. Ne mmae no fi ase ansa na waba abebu atɛn.
^ nky. 12 Nkyekyɛm 12: Hwɛ adesua asɛm a wɔato din “Hwɛ! Me Ne Mo Wɔ Hɔ Nna Nyinaa” wɔ Ɔwɛn-Aban yi kratafa 10-12, nkyekyɛm 5-8.
^ nky. 16 Nkyekyɛm 16: Hwɛ adesua asɛm a wɔato din “Ka Kyerɛ Yɛn, Bere Bɛn na Eyinom Bɛba Mu?” wɔ Ɔwɛn-Aban yi kratafa 7-8, nkyekyɛm 14-18.
WOTEE NKYERƐKYERƐMU NO ASE?
‘Akoa nokwafo ne ɔbadwemma no’: Kristofo kakraa bi a wɔasra wɔn a wosiesie honhom fam aduan ma wɔn mfɛfo gyidifo wɔ Kristo mmae mu no. Eyinom ne Akwankyerɛ Kuw a ɛwɔ hɔ nnɛ no
“N’asomfo”: Eyinom ne wɔn a wɔde honhom fam aduan ma wɔn nyinaa. Wɔn a wɔasra wɔn ne nguan foforo no nyinaa di honhom fam aduan no bi, enti wɔn nyinaa yɛ ‘asomfo’
“Ne wura de no asi n’asomfo so”: Afe 1919 na Yesu paw anuanom a wɔasra wɔn bi sɛ n’akoa nokwafo ne ɔbadwemma no
“Ɔde no besi nea ɔwɔ nyinaa so”: Kristo de nea ɔwɔ bɛhyɛ wɔn a wɔbom yɛ akoa no nsa bere a wɔanya ɔsoro akatua no. Wɔne wɔn mfɛfo a wɔbom yɛ 144,000 no nyinaa ne Kristo bedi tumi wɔ soro
“SƐ AKOA BƆNE NO . . .”
Yesu de asɛyɛde a emu yɛ duru ahyɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no nsa. Ɛno ne sɛ wɔbɛhwɛ asomfo no ama wɔn honhom fam aduan bere a ɛsɛ mu. Na Yesu nim sɛ wɔn a asɛyɛde kɛse hyɛ wɔn nsa no wɔ akontaabu kɛse nso. (Luka 12:48) Enti bere a ɔde mfatoho a ɛfa akoa nokwafo ne ɔbadwemma ho reba awiei no, ɔde kɔkɔbɔ bi a emu yɛ den mae.
Yesu kae sɛ ebia akoa bɔne bi bɛka sɛ ne wura akyɛ na wafi ase ahwe ne mfɛfo nkoa no. Yesu kae sɛ, sɛ ɛba saa na owura no ba a, ɔbɛtwe akoa bɔne no ‘asõ denneennen.’—Monkenkan Mateo 24:48-51.
Nea Yesu kae yi kyerɛ sɛ akoa bɔne kuw bi bɛtena hɔ wɔ nna a edi akyiri yi mu anaa? Dabi. Ɛwom, nnipa bi yɛ wɔn ade te sɛ akoa bɔne a Yesu kaa ne ho asɛm no. Sɛ saafo no ka wɔn a wɔasra wɔn no ho oo, sɛ nso wɔyɛ “nnipakuw kɛse” no mufo oo, yɛbɛfrɛ wɔn awaefo. (Adi. 7:9) Nanso eyinom nyɛ akoa bɔne kuw. Yesu anka sɛ ɔbɛpaw akoa bɔne bi. Mmom, na ɔrebɔ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no kɔkɔ.
Kae sɛ Yesu de asɛmfua “sɛ” na efii ne kɔkɔbɔ no ase. Nhomanimfo bi kae sɛ Hela kasa mu no, ɛkyerɛ “biribi a obi nhwɛ kwan sɛ ebesi.” Ɔkwan bi so no, na Yesu reka sɛ: ‘Sɛ akoa nokwafo ne ɔbadwemma no yɛ ne mfɛfo nkoa basabasa na owura no ba a, ɔbɛtwe n’aso papaapa.’ (Hwɛ Luka 12:45 nso.) Nanso akoa nokwafo ne ɔbadwemma kuw no akɔ so awɛn na wama nkoa a aka no honhom fam aduan a ɛte apɔw.
Anuanom a wɔasra wɔn a wɔka bom yɛ akoa nokwafo no nim sɛ nea wɔbɛyɛ Yesu asomfo no biara, wobebu ho akontaa akyerɛ Owura no. Ade titiriw a ɛda anuanom a wɔasra wɔn yi koma so paa ne sɛ wɔbɛyɛ adwuma a wɔde ahyɛ wɔn nsa no pɛpɛɛpɛ, na sɛ Owura no ba a, wama wɔn ‘amo.’
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2013